को असल, को खराब ?
अहँ जोगिन सकिएन ! बडो होसियारी अपनाउँदाअपनाउँदै पनि चीनको वुहान सहरमा प्रकट भएर विश्वव्यापी व्यथा बन्न पुगेको कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको चपेटाबाट बच्न सकिएन, यो विषाणुले एक दिन मलाई पनि समातेरै छोड्यो।
सरकारी स्वास्थ्य मापदण्डलाई राम्रैसँग पालना गरेको छु भन्ने लाग्थ्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नु पनि किन ? आफ्नै स्वास्थ्यको सवाल ! भरसक कामै नपरी घरबाट निस्किएको थिइनँ। बाहिर निस्किहाल्न परे पनि उचित ढंगमा मास्क लगाएर हिँडेको थिएँ। भौतिक दूरीको पनि ख्याल गरिएकै थियो। खल्तीमा स्यानिटाइजर बोकेकै थिएँ र कतै हातले नयाँ चिज छोइहाले स्यानिटाइजर दलिहाल्थेँ।
सुरूका दिनमा त हातमा पञ्जा लगाएर पनि हिँडेको थिए, तर त्यो त्यति प्रभावकारी नहुने भन्ने सल्लाह पाएपछि लगाउन छोडेको थिएँ। सधैँ घरमै बसेर पनि काम नचल्ने, कहिलेकाहीँ जरूरी कामले निस्कनै पर्‍यो। हप्ताको एक पटक घरायसी सामान केही न केही खाँचो परिहाल्छ, किनमेलका लागि पनि निस्कनै पर्‍यो।
मेरा राजनीतिक गतिविधि लगभग शून्य छन्। त्यो सिलसिलामा कतै निस्कनु परेको छैन। जागि-–व्यापारमा कहीँ जानु छैन। कोरोना कालमा जुमिनार र वेबिनारले चाहिँ अलिअलि हैरान बनाएकै हो। नेतादेखि कार्यकर्तासम्मका लामालामा पट्यारलाग्दो भाषण ! कसैको भाषणमा कुनै खास आकर्षण छैन। बोलीमा कसैले आफूलाई बीपी भन्दा कम ठान्दैनन्, तर वर्षौंदेखिको निष्ठा, आदर्श र क्षमता शून्य व्यवहार त देखिरहेकै छौं !
साथीभाइहरू घरमा बसेर समय बिताउन निकै गाह्रो भयो भन्छन्, तर मलाई त्यस्तो महसुस भएको छैन। विगतमा पढ्न नभ्याएका पुस्तक अलिकति भए पनि पढ्न पाइएको छ, अलिअलि कविता कोर्न भ्याइएको छ, दैनिक, साप्ताहिक पत्रिका र अनलाइनहरूलाई पहिले भन्दा निरन्तर लेख्न पनि भ्याइएको छ, कतिपय अन्य लेखन पनि चलेको छ। समय त उसै बितिरहेको छ।
सरकारले २०७६ चैत १० मा भोलिपल्ट अर्थात् ११ गते राति १२ बजेबाट दुई हप्ते लकडाउनको निर्णय गर्र्दैगर्दा काम विशेषले विराटनगर-दमकतिर थिएँ। त्यसै दिनको उडान थियो र धन्न बेलैमा काठमाडौं आइपुगियो। त्यसपछि सरकारी आदेशलाई सम्मान गर्दै आनन्दसँग लकडाउनमा बसियो।
स्वासप्रस्वासमा समस्या नआएसम्म र ज्वरो उच्च नभएसम्म र घर वा डेरामा छुट्टै वाथरूमको सुबिधा र हेरविचार गर्ने मानिस हुँदासम्म घरमा नै आसोलेसनमा बस्नु नै उचित हो । अहिले अस्पताल पुग्नु कम्ता जोखिमयुक्त छैन। काठमाडौंका मेयरले तारे होटलमा बसेको जस्तै सुबिधा पाउने र धान्न सक्नेका लागि होटलको आइसोलन सुबिधाजनक हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।
झण्डै आठ महिनाको अवधिमा केही सामान्य राजनीतिक भेटघाटबाहेक कुनै गतिविधिमा सामेल भएको छैन। एकाध पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, चाक्सीबारी र कोइराला निवासलगायतको ठाउँमा पुगियो। तर, त्यो पनि दुई महिनाअघि मात्रै। त्यसपछि त कतै गएको छैन। मलाई कसरी यो महामारीले समात्यो ? कहाँबाट आयो ? त्यसको सूत्र मैले अहिलेसम्म ठम्याउन सकेको छैन।
हुन सक्छ, म नै बढी बाहिरतिर हिँडडुल गर्ने कारणले मैले नै कतैबाट कोभिड लिएर आएँ कि? नवराज दाइ (नेता नवराज सुवेदी)लाई पनि संक्रमित गरेँ कि भन्ने मनमा एक प्रकारको भयले ठाउँ लियो। यदि त्यसो हो भने सबैभन्दा पहिले सर्ने सम्भावना मेरी पत्नीलाई हुन पर्ने ? उनमा कुनै लक्षण नै देखिएन।
नवराज दाइ र भाउजूलाई उमेरका कारणले पनि मभन्दा अगाडि सिम्पटम देखिएको हुन सक्छ। मलाई पनि टाउको दुख्न त चारपाँच दिनअगाडि नै सुरु भएको थियो, तर कोभिडको कारणले दुखेको भन्नेतर्फ मेरो ध्यान नै गएन। दुई महिनाअघि पिनास हुँदा मलाई यसरी नै टाउको दुखेको थियो। यो पिनास फेरि बल्झियो कि भन्ने लागेर जलनेती गर्न थालेको थिएँ। तर त्यो दुखाइ कोभिडकै पो रहेछ !
शरीरले थेगेसम्म अन्य लक्षण देखिएन, शरीरले लड्न नसकेपछि नै अन्य लक्षण देखियो होला। मलाई भने मेरो कारणबाट बूढा मान्छेलाई कोभिड भयो भन्ने चिन्ताले सतायो! यी सबै अनुमानको कुरा भयो। कोभिडको लक्षण र सर्ने विषय अहिलेसम्म अनुसन्धानमै अड्केको छ। यो विषयमा मेडिकल एक्स्पर्ट वा अनुसन्धानकर्ताहरूले मात्रै केही बताउन सक्लान्। जे भए पनि नवराज दाइ दम्पत्ति र म तीनै जना कोभिड–१९ बाट मुक्त भयौं, यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा भयो।
झण्डै चार वर्षदेखि व्यावहारिक कारणले चाबहिल मैजुबहालको आफ्नो कटेरो छोडेर अलि पर कुमारीगालमा गणेश/शर्मिला थापाजीको घरमा डेरा लिएर बसेको छु। घरबेटीले मानवीय भावना देखाउँदै लकडाउन अवधिमा एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गरेर हार्दिकता देखाए। यही टोलका मेरा अनन्य मित्र विदुर लुइँटेलजीले मलाई घरबाट डेरामा पुर्‍याइदिएका हुन् ! यो मेरो जीवनकै पहिलो डेरा अनुभव हो।
सम्झने हो भने, एक प्रकारले यो जिन्दगी नै डेरा हो। मेरो डेरासँगै पूर्वमहापञ्च नवराज सुवेदी र पुराना पत्रकार, लोकप्रिय गीतकार एवम् वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक यादव खरेलजीको निवास पर्छ। डेरामा बस्नुअघि यादवजी र विदुरजीसँग कहिलेकाहीँ मर्निङवाकमा कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरेको साथमा गएको छु। तर, कुमारीगाल हाइटको त्यो वस्तीमा आएर बसेदेखि मेरो सबैभन्दा निकट पारिवारिक मित्रता चाहिँ सायद दुवै राजनीतिक प्राणी भएर हो कि नवराज सुवेदीसँग अलि बढी हुन पुग्यो।
पूर्वमन्त्री एवम् राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष सुवेदीको निवासमा पहिलो पटक ०४२ सालको वैशाखमा छिरेको मलाई राम्रै सम्झना छ। त्यसबेला प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसले जेठ १० गतेदेखि पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध प्रजातन्त्रको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन ‘सत्याग्रह’ सुरू गर्दै थियो। सत्याग्रहको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने क्रममा कांग्रेसको घरदैलो अभियानको सन्दर्भमा नेताहरू स्व. शिवध्वज बस्नेत, स्व. आदित्यनाथ न्यौपाने, अम्बिका बस्नेत लगायतसँग म नवराज सुवेदीको निवास पुगेको थिएँ।
०१८ साल अगाडिको कांग्रेसी त्यसपछि लामो समय पञ्चातयकालमा मन्त्री बनेका सुवेदीले हाम्रा कुरा सुन्नु भयो, हार्दिकता देखाउनु भयो र चिया खुवाएर बिदा गर्नु भएको थियो।
मैजुबहालको मेरो घरबाट कुमारीगालस्थित सुवेदी निवास पुग्न ५ मिनेट पनि लाग्दैन। त्यसपछि उहाँको घरमा जाने मेरो कहिल्यै कुनै प्रसंग वा आकर्षण भएन। पञ्चायती व्यवस्थाको विरूद्ध लडेको म जस्तो कट्टर कांग्रेसीका लागि महापञ्चको घर जान कुनै आकर्षण हुने कुरा पनि भएन। त्यसमाथि प्रजातन्त्र विरोधी, निरंकुशतावादी, देश लुटेका पञ्चे-मण्डले भनेर घृणाभाव मनमा पालेर बसेको कट्टर कांग्रेसी महापञ्च नवराज सुवेदीको घरमा किन जानु !
कहिलेकाहीँ विवाह समारोह वा अन्य कुनै काम र घटनाविशेषमा जम्काभेट हुन्थ्यो, सामान्य शिष्टाचार हेल्लोहाई हुन्थ्यो! तर, अहिले संयोगले तिनै पूर्वमहापञ्च नवराज सुवेदी, म कट्टर कांग्रेसीको निकट मित्र बन्नु भएको छ। यो पट्यारलाग्दो लकडाउन र कोरोनाकालले त हामीलाई अझ धेरै नजिक ल्याएको छ।
राजनीतिबाट लगभग निवृत्त भैसकेका, अरू राजनीतिज्ञको जस्तो छोराछोरी वा कुनै पारिवारिक राजनीतिक उत्तराधिकारी समेत नभएका ८२ वर्षीय पुराना राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीको अब कुनै व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षा देखिँदैन। ‘अब यो राप्रपा पनि छोडेको घोषणा गरेर स्वतन्त्र भएर बसुँ कि जस्तो लागेको छ लोकेशबाबु’ भन्नुहुन्छ दाइ।
राजनीतिक जीवनको अन्तिमकालतिर, विद्यार्थी जीवनमा लागेको पार्टी कांग्रेसमा नै प्रवेश गर्नुस् दाइ भनेर म जिस्क्याउँछु। ‘कांग्रेसमा तिमीहरूकै यो हविगत छ, अर्कातर्फ कांग्रेस नै कता छ? अब कता छिर्नु भाइ’ भन्नुहुन्छ। ‘छिर्ने भए त ०४७ मै छिर्ने थिए, किसुनजीले नवराजजी आउनुहोस् कांग्रेसमा भन्नु भएको थियो। अब कतै जान्न। मर्नुअघि देशको राजनीतिले स्थायित्व पाएको, प्रजातन्त्र सुदृढ भएको, मुलुक बलियो एवम् सुरक्षित भएको देख्न पाए हुन्थ्यो। तर, खै त्यसको सम्भावना कहीँकतै देखिन्न’, देशको राजनीतिक परिस्थिति देखेर खिन्न दाइ थप्नुहुन्छ - ‘म नियतिले राप्रपामा छु, यो कुनै राजनीतिक शक्ति होइन, देशको राष्ट्रवादी शक्ति राजसंस्थालाई कम्युनिस्टसँग मिलेर कांग्रेसले फाल्यौ, गलत गर्‍यौ। राजसंस्थापछि यो देशको कांग्रेस नै प्रजातान्त्रिक शक्ति मात्र नभएर प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति पनि हो। कांगे्रस बलियो भए, प्रजातन्त्र सुदृढ हुने हो। कांग्रेस नै सिद्दिए देशमा के हुन्छ? प्रजातन्त्र रहे न साना पार्टीको अस्तित्व हुने हो, तर तिमीहरूको निकम्मा नेतृत्वले गर्दा कांग्रेस सिद्दिन लाग्यो।’
हामी कांग्रेसीभन्दा कम चिन्ता छैन नवराज दाइलाई कांग्रेस बिग्रिएकोमा। तर, बहुदल आएको ३० वर्षपछि अझै पनि कांग्रेसीमा यति राजनीतिक असहिष्णुता र घृणाभाव पाउँछु कि कुनै प्रसंमा नवराज सुवेदीसँगको तस्बिर मैले सामाजिक सञ्जालमा राखेँ भने ‘त्यो पञ्चे बुढोसँग फोटो खिचेर किन सेयर गरेको लोकेश दाइ’ भनेर मेरो खुब आलोचना गरिने छ। तर, आफ्नै नेताको कुरूप अनुहारको कुनै चर्चा गर्दैनन् !
३० वर्षको पञ्चायती शासनकाल र ३० वर्षको बहुदलीय शासनकालको तुलना गर्ने हो प्रजातन्त्रका लागि लडेका हामीजस्ता राजनीतिकर्मीलाई आफ्नै दलको नेताको अनुहार देखेर शीर निहुरिने अवस्था छ। बीपी कोइरालाको विचार र चिन्तन, व्यक्तित्व अनि गणेशमान सिंह र किसुनजी जस्ता त्यागी नेताको जीवनगाथा र उहाँको सामीप्यले पनि पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध लाग्ने प्रेरणा मिल्यो।
विद्यार्थीकालदेखि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जोडिन पुगियो, कांग्रेसी भइयो। पञ्चायत फाल्नु पर्छ, बहुदल ल्याउनु पर्छ, त्यसपछि त देश राम राज्य नै हुन्छ भन्ने एक प्रकारको सपना र हुटहुटीले जानेर–नजानेर राजनीतिमा लागियो। तर, आजको कांग्रेस अनि देशकै राजनीतिक अवस्था देखेर मन त्यसैत्यसै कुँडिन्छ। के सोचेका थियौं उहिले, के पायौं अहिले ?
निश्चयः नै पञ्चायत निरंकुश थियो, जनअधिकार थिएन। राजा निरंकुश थिए, राज्यमा बेथिति र भ्रष्टाचार थियो। पञ्चहरू पनि भ्रष्ट थिए। तर, अहिले जस्तो ठूलो स्तरको खुल्ला लुटतन्त्र त्यसबेला थिएन। देशको राष्ट्रियतामाथि अहिले जस्तो खेलबाड थिएन। राजसंस्था वा राजाहरूले पनि देशको अस्मितामाथि खेलबाड गरेका थिएनन्, बरू सकेको जगेर्ना नै गरेका हुन्। बीपी कोइरालाले त्यसै ख्यालठट्टा वा लहडमा राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेका थिएनन्।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा अलिकति त डर थियो दरवार छ, हामी माथि पनि कसैले निगरानी गरिरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिलेको कथित लोकतन्त्र, गणतन्त्रकालमा नेताहरूलाई कसैसँग कुनै डर छैन। नियन्त्रण र निगरानी केही छैन। नियमनकारी संवैधानिक संस्थाहरू सरकार र राजनीतिक दलकै लाचार छायाँ भएका छन्। दक्षिण एसियाकै भ्रष्ट देश भनेर नेपाल चिनिएको छ, स्वयम् प्रधानमन्त्रीमाथि नै भ्रष्टाचारीको मतियार भनेर विश्वव्यापी रिपोर्ट आउँदा पनि जिम्मेवारीबोध देखिएन।
प्रजातन्त्रमा जनतासँग डर हुनु पर्ने हो, विधि र कानुनको भय हुनु पर्ने, त्यो केही छैन। सबैतिर अराजकता र राजनीतिक छाडापन व्याप्त छ। यसैको कारण राजनीति र सिंगो समाज भ्रष्टाचार, व्यभिचार र दूराचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। न्यायालय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबै सेटिङमा चलेका छन्। राजनीतिमा केवल सत्ताबाहेक राष्ट्रपे्रमको भावना लगभग शून्य छ। जनतामा राजनीतिप्रति यत्तिको चरम निराशा शायद यसअघि कहिल्यै थिएन।
प्रजातन्त्रको तारणहार कांग्रेस र सर्वहारा वर्गको मसिहा भनिएका कम्युनिस्ट नेताहरूको ३० वर्षअगाडिको जीवनस्तर र शैली अनि अहिलेको तुलना गरेर हेर्ने हो भने हिजोका पञ्चसँग घृणाभाव राख्नुको अब कुनै औचित्य छैन। त्यसमाथि पूर्वपञ्च र राप्रपा नेतालाई रातो कार्पेट बिछ्याएर कांग्रेसमा भित्राउने, राजनीतिक सिद्धान्त र निष्ठा छोडेर आजभन्दा दुई दशक पहिले नै पूर्वमहापञ्च सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मन्त्रिमण्डलमा बसेर सत्ता सुख भोग्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टले अझै के नैतिकताले पूर्वपञ्चको विरोघ गर्नु खै !
यता छिमेकमा आएर बसेपछि मप्रति नवराज सुवेदी दाइले देखाएको हार्दिकता र स्नेहले उहाँसँग मेरो निकटता हुनु र उहाँप्रति मेरो सद्भाव बढ्नु स्वाभाविक छ। जगदम्बा प्रकाशनले २०६९ मा प्रकाशित गरेको नवराज सुवेदीको आत्मसंस्मरण कृति ‘इतिहासको एक कालखण्ड’ पढिसकेपछि उसै पनि उनीप्रति अलिकति श्रद्धा बढेको थियो। सन् १९७० मा नेपालको भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको १० वर्षे अवधि समाप्त भएको थियो। भारतले अस्वाभाविक सर्त राखिरहेका कारण नयाँ सन्धिमा सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन। भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थलगायतको आपूर्तिमा रोक लगाइसकेको थियो।
सायद भारतले नेपालमाथि लगाएको पहिलो नाकाबन्दी थियो त्यो। ०२६ सालको दसैंलगत्तै उद्योग वाणिज्य सचिव डा. पुष्करनाथ पन्तको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भारतसँग १० दिन कुरा गरेपछि सन्धि हुन सकेन भन्ने खबर आयो। त्यसपछि राजाकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा अर्थ सचिव भेषबहादुर थापा र परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाल सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल तत्काल दिल्ली पठाउने निर्णय गर्‍यो।
सो डेलिगेसनले तीन दिनसम्म विभिन्न चरणमा बैठक गर्दा समेत सन्धि गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेन। काठमाडौंमा पुनः बैठक बस्ने गरी छलफल टुंगियो। त्यत्तिकैमा भारतीय काउन्टर पार्ट वाणिज्यमन्त्री ललितनारायण मिश्रले मन्त्री सुवेदीलाई ‘तपाईंसँग प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भेट्ने इच्छा गर्नु भएको छ। अहिले यहीँबाट म तपाईंलाई लिएर जान्छु, जाऔं’ भने। यति सुनेपछि नवराज सुवेदीलाई रिस उठ्यो।
उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू, यदि श्रीमती गान्धीलाई मैले भेटेपछि सन्धि हुन्छ भने म भेट्छु। नभए उहाँलाई किन दुःख दिने? म बिदा पाउँ। भोलि बिहानको वायुयानबाट फर्कन्छु। तपाईंको काठमाडौंमा चाँडै स्वागत गर्न पाउँ।’ मिश्रले सन्धि त अहिले हुँदैन भने। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई भारतको राजधानी दिल्लीमा बसेर सहमति गर्ने, विदेशी दूतावासको अधिकृतसँग अलिकति साँठगाँठ भएकै भरमा पार्टीमा दादागिरी देखाउने र नेतृत्व हत्याउने, विदेशी खुफिया एजेन्सीसँग मेरो सम्बन्ध छ भनेर गौरवपूर्वक उल्लेख गर्ने, पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन विदेशी राजदूतलाई निम्त्याउनेजस्ता हर्कत अब सामान्य हुन थालेका छन्।
आन्तरिक संकटमोचनका लागि मध्यरातमा विदेशी खुफिया प्रमुखसँग अपारदर्शी ढंगले घण्टौं बसेर गोप्य गफ गर्नु पनि ठूलो कुरा हुन छाडिसकेको छ! यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमानमा व्यक्तिगत मन्त्रीका हैसियतमा नवराज सुवेदीले त्यसबेला लिएको जति अडानको अपेक्षा राख्न कसरी सकिएला र! अनि अहिलेका नेताहरूको प्रसस्ति गाएर अझै पञ्चहरूको आलोचना गर्नुको के औचित्य होला र !
नेपालमा लकडाउन सुरू भएको आठ महिना पूरा भएको छ। कडा लकडाउनको समय मानिसमा त्रास पनि त्यत्तिकै थियो। कसैको घरमा जाने कुरा नै भएन। कतिपय मेरा निकट साथीहरू र आफन्तले घरमा आउन प्रतिबन्ध नै गरेका थिए, त्यो स्वाभाविक थियो। व्यक्तिगत गतिविधि र कार्यक्रम शून्य। त्यसबीचको कहालिलाग्दो समयमा मेरो सबै भन्दा नजिकको साथी नवराज सुवेदी नै बन्नु भयो। २-४ दिन म उहाँका पुगिनँ भने उहाँ लोकेशबाबु भन्दै म कहाँ आइपुगिहाल्ने वा लोकेशबाबु कफी सँगै पिउँ भनेर मलाई फोन गरेर बोलाइहाल्ने।
बेलामौकामा साँझको सेसन पनि सँगै हुन्थ्यो। मीरा भाउजु, छोरा कनक, नातिनी आर्या सबैको त्यत्तिकै हार्दिकता र सम्मान। राजनीतिक मानिस, समसामयिक विषयमा कफी पिउँदै गफिएर बस्नुको मजा पनि अर्कै। त्यसमा बेलामौकामा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको उपस्थितिले थप रोचकता आउने।
लकडाउन भएदेखि यसरी मेरो नियमित बसउठ गर्ने नवराज सुवेदीको घरमा कात्तिकको दोस्रो हप्ता कसरी यो अदृश्य जिवाणु प्रवेश गरिहाल्यो। नवराज दाइको दम्पति नै प्रायः घरबाट बाहिर ननिस्कने, छोरा र नातिनी दुई जना मात्र बाहिर निस्कने तर छोरा र नातिनीलाई नेगेटिभ रिपोर्ट, नवराज दाइ र मीरा भाउजुलाई पोजिटिभ देखिएको थियो।
८२ वर्षको उमेरमा सुगर, प्रेसरलगायतका रोगहरू बोकेर बस्नुभएका नवराज दाइलाई कोराना पोजिटिभ देखिएपछि प्रथमतः उहाँकै बारेमा चिन्ता लाग्यो। दोस्रो उहाँको घरमा नियमित गैरहने, बस्नेखाने गरेका कारण आफू पनि कोरोनाबाट संक्रमित भइने हो कि भन्ने मनमा कताकता डर लाग्न थालिसकेको थियो। नभन्दै दाइको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको चार दिनपछि मेरो जिउले पनि लक्षण देखाइहाल्यो।
कात्तिक १५ गते साँझ एपीवान टीभी सम्पादक टीकाराम यात्रीको कल आयो, ‘लोकश दाइ भोलि बिहान निरञ्जन स्वामीसँग कुरा गरौं।’ म विगत झण्डै दुई महिनादेखि घाँटीको अल्सरको कारणले भ्वाइस रेस्टमा बसेको थिएँ। यसबीच म रेडियो, टीभीमा बोल्न गैरहेको थिइनँ। केही दिनअघि मात्र डाक्टरलाई देखाएको थिएँ, अल्सरको निकै सुधार भएको छ भनेका कारण बिहान एपी वानमा आउने बचन दिएँ।
१६ गते बिहान ८.३० देखि ०९.०० सम्म आधा घण्टा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक मामिला र समसामयिक विषयमा निरञ्जन स्वामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर घर पर्किएँ। बिस्तारै शरीरले निहुँ खोज्न थाल्यो। शरीर मर्कन सुरू गर्‍यो, बिस्तारै रूघा लाग्यो, त्यो बढ्दै गएर नाकको डाँडी नै फुट्ला जस्तो हुने गरी दुख्न थाल्यो। रातिसम्म १०० डिग्री ज्वरो आयो।
यी लक्षण देखिएपछि म कोभिड-१९ ले मलाई समात्यो भन्नेमा निश्चिन्त भैसकेको थिएँ। फ्ल्याटमा दुइटा बाथरूम छन्, म एटेच बाथरूम भएको कोठामा आइसोलेट भएर बस्न थालिहालेँ। भोलिपल्ट बिहानै पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब दिएँ, अर्को दिन शंका गरेअनुसार नै रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। आत्तिने कुरा भएन। स्वास्थ्यको नियम पालना गरेर घरमै बसेँ।
म दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान भएको देशको नागरिक ! विकसित देशले पनि संविधानमा व्यवस्था गर्न नसकेको मौलिक अधिकार मेरो संविधानले मलाई दिएको छ। संविधानको भाग ३ धारा ३५ बमोजिम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ भनेर व्यवस्था गरे बमोजिम मैले जस्तै सबै नागरिकले त्यो हक पाउनु पर्ने थियो।
संविधानमा लेख्दैमा नागरिकले पाउने त रहेनछन्। भन्न त दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान भनेर निकै गीत गाइएको थियो। देशको सामथ्र्यले कति सम्भव होला, संविधान बनाउँदा कुनै ख्याल नै गरेनौं। सरकारको डेलिभरीको के कुरा गर्नु ? संविधानको त्यो धाराले मलाई स्वतः निःशुल्क जाँच र उपचार गर्दैन। त्यसका लागि त सरकार र सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली नै चाहिन्छ। राज्य कोभिड नियन्त्रणमा चुकेको मात्र हैन, निकम्मा साबित भैसकेको छ। सरकारलाई देश र जनताको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छैन।
विगत एक वर्षदेखि आन्तरिक रूपमा लडेर नै समय बितेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी कसरी बचाउने चिन्ता छ। पछिल्लो अवस्थामा त पीसीआर लगायत कोराना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भनेर सरकारले हातखुट्टा छोडेको अवस्था छ। संविधान देखाएर परीक्षण र उपचार भएन, शुल्क तिरेर पीसीआर टेस्ट गर्नुको विकल्प थिएन, त्यसै गरियो।
मेरो कोभिड-१९ को रिपोर्ट सीटी भ्यालु धेरै आएको छ। जति धेरै सीटी भ्यालु त्यति नै शरीरमा भाइरसको लोड कम छ भन्ने बुझिने रहेछ। मेरो सीटी भ्यालु ३४.३९ थियो, ३७ भन्दा माथि भए नेगेटिभ मानिने रहेछ। तर यस अनुसार मलाई कुनै सिम्प्टम नै देखिनु नपर्ने ? त्यसो भएन। आठ/दस दिनसम्म त गाह्रो पनि भयो। रिपोर्ट नेगेटिभ भएको भोलिपल्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भनेर एकजना महिलाले फोन गरिन्। त्यो एक फोनबाट मैले देशमा सरकार भएको अनुभूति गर्दै गर्व गर्न पर्ने भयो।
नवराज दाइले ‘ओहो तपाईंलाई त सरकारले फोन गरेछ, हामीलाई त गरेन, पञ्च भनेर हो कि’ भनेर हँसाउनु भयो। मन्त्रालयबाट फोन गर्ने महिलालाई आफ्नो सीटी भ्यालु बताउँदा उनले यहाँको सीटी भ्यालु एकदम धेरै रहेछ, एक हप्तापछि जचाउँदा नेगेटिभ आउँछ, तपार्इंबाट अब अरू कसैलाई सर्दैन, सामान्य रुपमा बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ भनिन्।
पीसीआर परीक्षणका लागि नमूना दिनु अघिल्लो दिनबाट नै एउटा कोठामा आइसोलेट भैसकेको थिएँ, तापनि रिपोर्ट आएपछि सीटी भ्यालु धेरै छ भनेर मैले पनि सुरूमा हल्कै रूपमा लिएको थिएँ। त्यसैबीच भाइरालोजिस्ट डा.शेरबहादुर पुनको भनाइ पढेको सेतोपाटीमा पढेको थिएँ- सीटी भ्यालु धेरै छ भन्दैमा हल्का लिन नहुने, प्रारिम्भक अवस्थामा भ्यालु कम पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी पीसीआर टेस्ट नै अहिलेसम्म ६५ देखि ७० प्रतिशत मात्र नतिजा सही आउने, स्याम्पल कसरी लिएको छ, ल्याब कति भरपर्दो छ, यी कारणले गर्दा पनि पोजेटिभ आइसकेपछि सीटी भ्यालु धेरै छ भनेर हेप्न नहुने बुझेर अलि सतर्क भएँ।
आइसोलेसनका क्रममा पढ्ले-लेख्ने भन्दा टीभी हेरेर बढी समय बित्यो। त्यसपछि अलिकति अनलाइन एवम् सामाजिक सञ्जालमा खेलेर बित्यो। अमेरिकी निर्वाचन र मतगणना, बिहार विधानसभा निर्वाचन र मतगणना अनि आफ्नै देशको सत्तारूढ दल नेकपाको घरझगडा त्यो हप्ता चर्चाको प्रमुख विषय थिए।
अमेरिका, युरोपलगायत विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस महामारी बढिरहेको, कतै दोस्रो त कतै तेस्रो चरणको लकडाउन सुरू भएको अवस्थामा भाइरसविरूद्धको खोपहरूको अनुसन्धान र परीक्षणका अन्तिम चरणका सुखद नतिजाको समाचारहरू पनि आए। यस्ता सुखद समाचार आइरहँदा नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशले भ्याक्सिनमा सहज पहुँच कसरी हुन्छ भन्ने विषय आमनेपालीका लागि सबैभन्दा चासोको सन्दर्भ हुनु स्वाभाविक छ।
स्वासप्रस्वासमा समस्या नआएसम्म र ज्वरो उच्च नभएसम्म र घर वा डेरामा छुट्टै वाथरूमको सुबिधा र हेरविचार गर्ने मानिस हुँदासम्म घरमा नै आसोलेसनमा बस्नु नै उचित हो । अहिले अस्पताल पुग्नु कम्ता जोखिमयुक्त छैन। काठमाडौंका मेयरले तारे होटलमा बसेको जस्तै सुबिधा पाउने र धान्न सक्नेका लागि होटलको आइसोलन सुबिधाजनक हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। सुरूका दिनमा कोराना संक्रमितलाई घरबेटीले धेरै सताएको खबरहरू आएको थियो, समझदार घरबेटी भएका कारण त्यो कष्ट व्यहोर्नु परेन, हार्दिकता र स्नेह नै देखाए।
घर वा डेरामा परिवारका बीच बस्दा परिवारबाट पाउने स्नेह र अपनत्वपन, तारे होटलमा पाइँदैन। मलाई लक्षण देखिएपछि आइसोलेसनमा बसिहालेँ, पत्नी अंगुरालाई कुनै लक्षण नदेखिए पनि परीक्षण गराउन खोज्दा उनले मानिनन्। अरू बेला कोभिडको महामारीबाट निकै डराउने अंगुराले मैले घरभित्रै कोरोना भित्राएपछि डर हराएको र अझ सदाभन्दा उनमा ज्यादा साहस, धैर्य पलाएको देखेर म चकित परेको थिएँ।
उनको भरपूर स्नेह अनि स्याहारले नै म छिटो तंग्रिएँ, उनलाई जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन। एक प्रकारले हामी दुवैजना घरमा आ-आफ्नो कोठामा आइसोलसनमा बसेपछि बाहिरबाट आवश्यक सपोर्ट गर्ने मानिस नभएको भए ठूलै समस्या पर्ने थियो। आफन्तको पूरापूर सहयोग मिल्यो। बेलाबखत फोन तथा म्यासेजबाट मेडिकल सल्लाह माग्दा झर्को नमानी बताइदिने डा. प्रकाशराज काफ्ले, ह्याम्स हस्पिटल, डा. केदारनरसिंह केसी, बीपी स्मृति अस्पताल र डा. विश्वनाथ कोइराला ओम अस्पतालको सहयोग अविस्मरणीय छ।
कोरोना भाइरस फ्लु वा रूघाखोकी जस्तै सामान्य हो, बेसारपानी, तातो पानी खाएर छुमन्तर गर्न सकिन्छ, भौतिक दूरी, मास्क लगाउने कुरा बेकार हो भनेर भन्नेहरू समाजमा त्यत्तिकै भेटिन्छन्। मेरो व्यक्तिगत अनुभवले यसलाई त्यसरी हल्का रूपमा लिनु गलत हो भन्छ। विशेष गरेर वृद्ध, दीर्घरोगी र मलाई कोरोना भयो भनेर हातखुट्टा छोड्ने मानिसका लागि यो रोग कम खतरा वा चुनौतीपूर्ण होइन। त्यसैले यसको खोप सर्वसुलभ नभएसम्म होसियारी अपनाउनुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: मंगलबार, मंसिर १६, २०७७ ०७:५२
झण्डै आठ महिनाको अवधिमा केही सामान्य राजनीतिक भेटघाटबाहेक कुनै गतिविधिमा सामेल भएको छैन। तर, कोरोनाले समातिहाल्यो।
अहिले संयोगले पूर्वमहापञ्च नवराज सुवेदी, म कट्टर कांग्रेसीको निकट मित्र बन्नु भएको छ। अझ यो पट्यारलाग्दो लकडाउन र कोरोनाकालले त हामीलाई धेरै नजिक ल्याएको छ।
३० वर्षको पञ्चायती शासनकाल र ३० वर्षको बहुदलीय शासनकालको तुलना गर्ने हो प्रजातन्त्रका लागि लडेका हामीजस्ता राजनीतिकर्मीलाई आफ्नै दलको नेताको अनुहार देखेर शीर निहुरिने अवस्था छ।
नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशले भ्याक्सिनमा सहज पहुँच कसरी हुन्छ भन्ने विषय आमनेपालीका लागि सबैभन्दा चासोको सन्दर्भ हुनु स्वाभाविक छ।
उहाँहरू टुनामुना गर्न खोज्नुहुन्छ, म ती टुनामुना हुन दिनेवाला छैन : प्रधानमन्त्री ओली
शुक्रबार, माघ ९, २०७७ २२:४८
हाम्रा साथीहरू वैचारिक र उद्देश्यका हिसाबले ‘आउटडेटेड’ भए : प्रधानमन्त्री ओली
शुक्रबार, माघ ९, २०७७ २२:१८
प्रचण्ड र नेपाल मुंगेरीलालजस्तै सपना देख्ने, तर आफ्ना लागि मात्र : प्रधानमन्त्री ओली
शुक्रबार, माघ ९, २०७७ २१:५४
‘‘दुनियाँका छोराछोरी अलपत्र पारी सिक्लेसबाट हेलिकप्टर चढेर काठमाडौं उत्रेको दिनदेखि प्रचण्डको अवतार परिवर्तन भयो’’
शुक्रबार, माघ ९, २०७७ २१:२६
नेकपा विभाजनमा दर्जनौं समस्या, प्रचण्डले आफ्नै पत्र सच्याए
बुधबार, माघ ७, २०७७ १८:०२
ओली र प्रचण्ड दुवैले पार्टी विभाजन भएको भन्दै आधिकारिकताको दाबी अहिलेसम्म गरेका छैनन्। पार्टी विभाजनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४...
‘‘प्रचण्डको ‘ननभेज’ आन्दोलनमा माधव नेपालको साथ हुँदैन’’
बुधबार, माघ ७, २०७७ १२:४०
छात्रालाई होटलमा लगेर परीक्षा लिने ३ जना शिक्षक पक्राउ, पाँच दिन थुनामा राख्‍ने अनुमति
मंगलबार, माघ ६, २०७७ २०:३०
पाटनको देगु तलेजु मन्दिरको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण गरिने
शुक्रबार, माघ ९, २०७७ १४:५३
के अमेरिका संसारकै अभिभावक बन्न सक्ला?
शुक्रबार, माघ ९, २०७७ १३:००
नेपाल आइपुग्यो भारतीय अनुदानको १० लाख डोज कोरोना खोप
बिहिबार, माघ ८, २०७७ १३:०७
कागेश्वरी मनोहरामा १४ सय किलोको ‘काग स्तम्भ’ (भिडियोसहित)
बिहिबार, माघ ८, २०७७ १२:५६
भित्तेघरका रामराजा : महल छाडेर 'बाँदर लड्ने भीर' मा घर, बस्नै नपाई बेपत्ता
बिहिबार, माघ ८, २०७७ ०९:२८
सन्दीप लामिछाने दिल्ली क्यापिटल्सबाट ‘रिलिज’
बुधबार, माघ ७, २०७७ २०:४९
ट्रम्पलाई बाइडेनको नामसँगै एलर्जी, बिदाइ भाषणमा उपलब्धिको बखान
बुधबार, माघ ७, २०७७ १५:३१
बलिउड निर्देशक साजिद खानमाथि यौन उत्पीडनको आरोप
बुधबार, माघ ७, २०७७ १५:२७